SERIE A Archives - Page 20 of 20 - SPORTS MYANMAR
ဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင်တွေထဲမှာ ဘယ်သူ အချမ်းသာဆုံးလဲ ?
April 3, 2020 - by Editor
ဘောလုံး ဟာ အားကစား တစ်ခု အဖြစ် ကနေ စီးပွားရေး ဆန်တဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခု အဖြစ် ကို ပြောင်းလဲ လာခဲ့ ပါပြီ ။ ငွေကြေးတန်ဖိုး ဖောင်းပွ လာတဲ့ ယနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာ အသင်း တစ်သင်း အနေနဲ့ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်တင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ ဘဏ္ဍာရေး တောင့်တင်း ဖို့ကလည်း …
အာဂျင်တီးနားသားတွေ ရိုနယ်ဒို ကို အမြင်မကြည်ကြတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဒိုင်ဘားလား ထုတ်ဖော် ပြောဆို
ယူဗင်တပ် နဲ့ အာဂျင်တီးနား တိုက်စစ်မှုး လေး ပေါ်လို ဒိုင်ဘားလား က အာဂျင် တီးနား နိုင်ငံ အတွင်း မှာ သူ့ရဲ့ ကလပ် အသင်းဖော် ရိုနယ်ဒို အပေါ် အမြင် မကြည်သူတွေ အများ အပြား ရှိကြတယ် လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် …
သေဆုံးခဲ့သူတွေကို လေးစားတဲ့ အနေနဲ့ စီးရီးအေ ရာသီကို ပြီးဆုံးအောင် ကစားသွားရန် တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ လာဇီယို အားကစား ဒါရိုက်တာ
လာဇီယို အသင်းရဲ့ အားကစား ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ အစ်လီတာရဲ က လက်ရှိ စီးရီးအေ ရာသီကိုသာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မြန် ရောဂါကြောင့် ဖျက်သိမ်း လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒါဟာ နောက်ထပ် ဘေးဒုက္ခ တစ်ခု ဖြစ်သွား လိမ်မယ်လို့ ဆိုလိုက် ပါတယ်။ အီတလီ ရဲ့ ထိပ်တန်း လိဂ်ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် လက်ရှိမှာ …
ဒီရာသီ အီတလီမှာ ရှိတဲ့ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ တွေကိုသာ ပယ်ဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင်… အင်ဇာဂီ
ဖိလစ်ပို အင်ဇာဂီက အီတလီ ကလပ်တွေဟာ ဒီရာသီကို ပြီးဆုံးအောင် ကစား သွားဖို့ အတွက် သြဂုတ်လထိ ရောက်ရင်လည်း ကစားသွားရန် ဆန္ဒ ရှိနေကြတယ်လို့ ယုံကြည် ထားပြီး အကယ်၍ ရာသီ ပြီးဆုံးအောင် မကစား နိုင်ခဲ့ပါက တစ်ချို့ ကလပ်တွေ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ သတိပေး သွားပါတယ်။ အီတလီဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ရိုက်ခံမှုဒဏ်ကို အများဆုံး …
ဘာကြောင့် ရိုနယ်ဒို ဟာ ယူဗင်တပ် တစ်သင်းလုံးကို Apple ကွန်ပျူတာတွေ ဝယ်ပေးခဲ့တာလဲ ?
iMac ကွန်ပျူတာတွေ ဟာ Apple ကနေ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကွန်ပျူတာ အမျိုး အစား တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကာလ ပေါက်စျေး ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကျော် ( မြန်မာ ငွေ ၁၃ သိန်းကျော် ) တန်ဖိုး ရှိပါတယ် ။ ဒီလို ကွန်ပျူတာ မျိုး ကို အခု …
Pogba အတွက် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကို special offer နဲ့ ချဉ်းကပ်မယ့် ယူဗင်တပ်
အီတလီ စီးရီးအေ ကလပ် ယူဗင်တပ် ဟာ မန်ချက် စတာ ယူနိုက်တက် မှာ ကစား နေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာ ကို လာမယ့် အပြောင်း အရွှေ့ အတွက် အဓိက ပစ်မှတ် အဖြစ် သတ်မှတ် ထားပါတယ် ။ ပေါ့ဘာ ဟာ ယူဗင်တပ် မှာ ၄ …
အာဆင်နယ် နဲ့ ရိုးမား ဘယ်အသင်းမှာ ကစားရတာ ပိုပျော်သလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်တဲ့ မီခီတာရန်း
အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် အသင်းတို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၊၂၀၁၈ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွှေ့တုန်းက ဆန်းချက်ဇ် နဲ့ မီခီတာရန်းကို ကစားသမားချင်း တိုက်ရိုက် အလဲအထပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နှစ်ဦးစလုံးဟာ သက်ဆိုင်ရာ ကလပ် အသင်းတွေမှာ ခြေစွမ်းပြဖို့ ရုန်းကန် ခဲ့ရပါတယ်။ မီခီတာရန်း ဟာ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ ပွဲဦးထွက်မှာ ဂိုးဖန်တီးမှု သုံးကြိမ် ပြုလုပ်ပြီး …
အင်တာ နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ အကြားက ခြားနားချက်ကို ပြောပြသွားတဲ့ လူကာကူ
“ကျွန်တော် အပြင် ထွက်လို့ မရ ပါဘူး ။ လေ့ကျင့်လို့ လည်း မရဘူး ။ အခု ၉ ရက်တောင် ရှိ ပါပြီ ။ အရင် တုန်းက ဘ၀ ကို လွမ်းတယ်ဗျာ” လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို လာခဲ့သူ ကတော့ အင်တာ မီလန် တိုက်စစ်မှုး ရိုမီရို …
စီးရီးအေ ကြယ်ပွင့် ၃ဦး အတွက် ပေါင်သန်း ၂၀၀ အသုံးပြုသွားမယ့် … နောက်ဆုံးရ ချယ်လ်ဆီး သတင်းများ
Daily Mail ရဲ့ ယနေ့ ညနေ သတင်း ဖော်ပြချက် တခု အရ ချယ်လ်ဆီး အသင်း ဟာ လာမယ့် အပြောင်းအရွှေ့ မှာ စီးရီးအေ ကြယ်ပွင့် ၃ဦး ဖြစ်တဲ့ အင်တာမီလန် တိုက်စစ်မှူး လော်တရို မာတီနက်ဇ် ၊ ယူဗင်တပ် ကွင်းလယ်လူ မာရလမ် ပီယာနစ် ၊ အေစီမီလန် …